बजारमा हाहाकार ! न ग्यास न मास्क - TodayKhabar
काठमाडौं, २८ फागुन । मंगलबार बिहान ११ बजे। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हटलाइन नम्बर ११३७ मा गुनासो आयो– ‘हेलो सरकार ! तीन दिनदेखि ग्यास लिन सबै पसल चहारें। तर कतै पाइनँ। एक थान सिलिन्डर मिलाइदिनुपर्‍यो।’ यो कीर्तिपुरका सुरेश महर्जनको गुनासो थियो। महर्जनको कुरा नटुंगिँदै अर्का एक सर्वसाधारण लाइनमा आइसकेका थिए।
हटलाइनमा मकवानपुर, झापा, रूपन्देही, सुर्खेत, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, इलाम, महेन्द्रनगर, पर्सा, मोरङ, सिरहा, नेपालगन्ज, कास्कीलगायतका जिल्लाबाट अत्यधिक गुनासो आइरहेको पोखरेलले बताए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
आउँदो चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने ओलीको दाबी